Unika umntwana umuthi onqunyiwe, kodwa awusebenzi ngesizathu esithile ... Mhlawumbe ingane ayifumani kahle? Ukulungiswa kwensimbi kumntwana kungcono ukugeza ngejusi le-orange, nemithi elwa namagciwane kanye neminye imithi - kungenjalo!
Ingabe bewazi ngalokhu? Futhi kuthiwani ngokuthatha i-vitamin-mineral complex kanye netiyi kudingeka ulinde amaminithi angu-15, ngaphandle kwalokho ama-microelements ngeke alayishwe? Ukuthi izifo zokwelapha ekhaya ezibandayo, ukukhuphuka okukhulu nokunye okungahambi kahle ingane akufanele igxume, okungukuthi ukuqothula futhi, njengoba kusho ochwepheshe, "ukuhlanza umlomo"? Ngaphandle kokucabangela lezi zingu-nuances ezibalulekile, ukwelashwa ngeke kusetshenziswe kuphela, kodwa kungalimaza izimbumbulu! Indlela yokwenza umntwana athathe imithi, nokuthi ungayifundisa kanjani ukuyiphatha ngokufanele?
Ngaphambi kokudla noma ngemuva?
Ukuze uthole impendulo yalo mbuzo, bheka emfundisweni yokulungiselela. Uma lokhu kungakhulumi ngokucacile, unike ingane enganeni engenalutho, okungukuthi, hhayi ngaphansi kwesigamu sehora ngaphambi kokumondla, noma amahora amabili ngemva kokudla. Khona-ke akukho lutho olungavimbela umuthi ekuguleni kahle ngokuqaphela ukugcwele kwesenzo salo. Le ndlela yokusebenza ihambisana nemithi yokwehla, ukunciphisa i-asidi yesisindo somzimba esiswini ku-gastritis kanye ne-gastroduodenitis, kanye nezitshalo zezitshalo nezindlela zokwelapha ekhaya ezinconywa ukuthi ziphuze, ukuxubha amazinyo akho kanye nokuhlanza umlomo wakho: ukuhlanganiswa okuncane kakhulu kwendaba yangaphandle ngolimi - nomphumela wonke uzohamba ize!
• Amalungiselelo e-cholagogue
Ingane ine-dyskinesia i-biliary tract, kanti udokotela unqume ukuthi yi-choleretic? Udinga ukuphuza umuthi 10-15 imizuzu ngaphambi kokudla, kodwa kufanele usebenzise ama-analgesics, antipyretic kanye non-steroidal (okungukuthi, i-steroid-free) izidakamizwa ezilwa nokuvuvukala (ama-NSAID), kanye nama-hormone e-steroid ngemva kwalokho, ngoba zicasula i-membrane ye-mucous yesisu sezingane .
Kanye nokudla ngokuvamile kuthatha imithi ye-enzyme - i-mezim, i-panzinorm, i-festal, ethuthukisa ukugaya kwayo.
• Amavithamini namagciwane
Nika ingane yabo ibe yandulela, futhi emva kokudla, kodwa nangendlela yokubusa ngentando yeningi, kusengcono ukubuka imfundo: konke kuxhomeke ukuthi hlobo luni lokulungiselela ingane ethatha.
Isisu namathumbu kukhona uhlobo lwezinto zokwelapha zamakhemikhali ezithombeni zomntwana: umuthi kufanele uhambisane ngokuphelele nokulandelana kwamakhemikhali okwenzeka lapha, ukuze kungabangeli umphumela ohlukile. Akuyona imfihlo ukuthi i-fiber fiber iyancipha ngokubamba amaphilisi. Ukudla, ijusi esiswini esiswini, ama-enzyme yokugaya inyama kanye ne-bile egcinwe ngesikhathi sokugaya ingakwazi ukusebenzisana nezidakamizwa, ukushintsha izakhiwo zabo. Umphumela wokwelashwa, ukuphepha kwawo nokusebenza ngezindlela eziningi kuncike esikhathini lapho umntwana athatha iphilisi, ukuthi udakiwe kanjani futhi uthathwe. Isibonelo, ama-pastries, i-pasta, amaswidi aphazamisa ukumunwa kwe-calcium, enqunywe ukuphendula okwehliswayo kanye nokwahlukana, namaqanda aqhamukayo kanye nama-omelets okuvimbela ukumunca kwensimbi - lezi zidakamizwa ngokuvamile zinikeza izingane eziphethwe yi-anemia.
• I-Acetylsalicylic acid (ASA, i-aspirin)
Kudingekile ukushiya imikhiqizo equkethe ama-preservatives kanye nokudla okubala ukudla kwe-tartrazine ephuzi: yengezwe ku-confectionery. Ngokusho kwesakhiwo samakhemikhali, kufana ne-ASA. okwandisa ingozi yokuphendula kabi kulo muthi, futhi ezinganeni le ngozi ingaphezulu kunabantu abadala. Lo muthi, ngendlela, awuhlanganisi kahle namaqanda, utamatisi, ushizi kanye nemifino enamagatsha ane-vitamin K (isipinashi, iklabishi kanye nelethisi).
• Ama-antibiotics emgqeni we-penicillin
Uma udokotela ebeka ingane yakho imithi enamandla kangaka. khona-ke inyane elingenakukwazi ukudla into equkethe ngisho nemifula yesikhunta - kungakhathaliseki ukuthi i-apula ene-cask ebolile, isinkwa esincane noma ngisho noshizi olubi njenge roquefort. Lokhu kungabangela ukuhlukunyezwa kwesisindo esiqine kakhulu!
Ukunikeza ingane imithi enjalo. okwamanje, yondla ngemithombo yamapricot omisiwe, omisiwe, ama-apricot (lokhu okukhambelana kwezinso kukhishwa ngamandla emzimbeni kanye noketshezi) bese unciphisa amaswidi - izidakamizwa sezivele zandisa izinga leshukela legazi. Ungazami ukunambitha imithi yengane ngokuyixuba ngejamu, i-ayisikhilimu, i-mousse noma ukufaka i-candy ngaphakathi. Ngokwenza lokhu ukhulula kakhulu isenzo esiwusizo.
• Ukulungiswa kwe-iodine
Kuvame ukunikeza izingane ezine-hypothyroidism (ukungabi khona kokukhiqizwa kwe-hormone yegciwane). Ukusebenza kwezidakamizwa kunciphisa iklabishi. i-turnips kanye neminye imifino emndenini we-cruciferous.
Amanzi abihlile noma abilisiwe noma abilisiwe (hhayi amaminerali nangaphandle kwegesi!) Ngomthamo wama-50-100 ml (ngaphandle uma imiyalo ithi ngenye indlela).
• Imithi yokwehla
Kumele kuhlanjwe ngamanzi amaminerali alkaline (Essentu-ki-4, Borzhomi, Slavyanovskaya, Smirnovskaya, Sairme, Jermuk), nezinsimbi ezinamaminerali amaminerali (Essentuki-17) nama-juice afanayo (i-orange, i-lemon, i-grapefruit, igromegranate, i-apula) , kodwa akekho - itiye nobisi. Ngendlela, uma uthela ubisi lwe-porcelaire ngobisi bese upheka oatmeal kuwo, ayikho i-milligram eyodwa yensimbi evela kulezi zitsha izoya egazini legazi.
• Ama-antibiotics (tetracycline, ampicillin) namalungiselelo aqukethe i-caffeine ne-calcium awahambisani nobisi nesoda.
• Ama-acidic ayanciphisa isenzo se-erythromycin futhi akhulise umphumela wama-agent avuselela ingane futhi avuselele ukulala.
• Amagilebhisi asemagilebhisi nama-black currant ekunciphiseni i-furosemide, i-amidopyrine ne-ibuprofen.
Izidakamizwa eziningi azikwazi nje ukuthuthukisa isenzo somunye nomunye, kodwa futhi zinciphisa umphumela wokwelashwa kunoma yimuphi noma ngisho nokudala inhlanganisela esongela ukuphila.
• I-asicorbic acid
Kungcono kakhulu futhi kusebenze kakhulu phambi kwe-coenzyme Q10 kanye nesimiso, futhi ngokuphindaphindiwe kwandisa umphumela we-beta-carotene (i-vitamin A) ne-tocopherol (i-vitamin E). Ukwenza izinsimbi zibe ngcono, udinga ukuba khona kwethusi futhi usize amavithamini amaningi: B5, B6, C kanye ne-folic acid.
• Amalungiselelo e-calcium
Thatha lezi zimali ukuqinisa amathambo abantwana ngaphandle kwezinto ezilandelanayo - i-phosphorus, i-magnesium ne-vithamini D - hhayi nje kuphela engenangqondo, kodwa ngezinye izikhathi eziyingozi - uma kungabikho lezi zinto, ngeke isetshenziswe emathanjeni, futhi esikhundleni sayo sizohlala nesihlabathi ezinso noma isilonda senyongo.
Ukuvimbela imiphumela emibi, kufanele bahlanganise namavithamini, izidakamizwa ze-antifungal (i-nystatin noma i-levorin), kanye nama-agent alungisa i-microflora. Futhi kusukela emgqeni wonke wezidakamizwa ezidakayo wezidakamizwa ezinjalo, ezimele ekhemisi, kudingeka ukhethe lezo ezingekho amabhaktheriya aphilayo. Ukugijima kwamakoloni ama-bacteria aphilayo ewusizo emathunjini ngaphambi kokuphela kwemithi yokwelapha imithi ayinalutho - isaphazeka. Yilapho usuqedile inkambo, khona- -muyakwamukela!
Ukuhlafuna noma ukugwinya?
Uma umntwana engazi ukuthi angalungisa kanjani amaphilisi, mnikeze amakhambi akhethekile ngendlela yama-syrups futhi ngobumnene, ngokuhambisana nobudala nesisindo, balala umthamo womuthi. Futhi uma ingane isivele iseneminyaka engu-5-6 ubudala, msize ukuba azi kahle leli khono! Imithi embalwa kuphela kunconywa ukuba ifune noma ichithe emanzini (amalahle asebenziwe, amaphilisi e-effervescent nama-powders avela ekushiseni nasekhanda), futhi lesi sidingo siboniswa kwisichasiselo. Kwezinye izimo, ubuqotho bomthamo owodwa abukwazi ukwephulwa: lokhu kungaba nomthelela omubi esimweni samazinyo nokufaniswa kwemithi. Ama-capsules, ama-dragees, amaphilisi egobolondo nemithi ehlala isikhathi eside (ER, SR, LP, forte asepaketheni yabo) ayinconywa ukuba aphule, aguqe noma afune - udinga ukugwinya! Amafomu anjalo wokulinganisa aklanyelwe ukudlulisa izithako ezisebenzayo ezingxenyeni ezithile zesimiso sokugaya, lapho ukugcoba kuphelelwa khona, "ukugcwaliswa" kuhlanganiswe ngokugcwele. Uma ikhishwa ngaphambilini, ngesikhathi sokumuncipha itholwe nge-enzyme yokugaya. Umphumela ufana nokuthi ingane igwinya "i-dummy" - i-placebo, okungukuthi, ayikho umphumela ongokwengqondo: uma i-crumb ikholelwa ukuthi umuthi uzokusiza, khona-ke uzizwa kangcono, okholelwa ngokholo, hhayi isenzo somuthi.
Futhi futhi mayelana nokuphepha kwezidakamizwa. Akukhona ngekithi yokusiza lokuqala (endlini lapho umcwaningi omncane ekhula khona, akusho ngaphandle). Ngifuna ukukukhumbuza, mama othandekayo nobaba, enye iqiniso elula: yonke imithi yabekwa ingane ngudokotela, futhi lowo othembelayo. Ukuphepha kwengane yakho kusezandleni zakho. Ungalimazi futhi ungenzi imithi!
Ukufisa ingane egulayo ukuba ilulame ngokushesha, sivame ukumgcoba ngamavithamini - ama-apula, ama-tangerines, ama-orang, ama-grapefruits nezinye izithelo. Ngesinye isikhathi, ukuze inyoni encane iphuze iphilisi, siyayiphunga ngomqondo wangempela ngamajusi futhi simnikezele. Ngakho, okungenani, tshela ososayensi bezokwelapha eCanada. Bathola ukuthi uma uphuza izidakamizwa ze-histamine (antiallergic) ngejusi lamagilebhisi, uthola imithi engaphansi kuka-2 kunamanzi ajwayelekile ahlanzekile. Umphumela ofanayo emithinini eminingi utholakala emajulini e-orange kanye ne-apple, kanye nama-grapefruits, ama-orang kanye nama-apula: ingane akufanele idle ngokushesha ngemuva kokuphuza imithi. Ngakho izithelo - izithelo, kanye amaphilisi - amaphilisi.
Ukulwa nezifo zokuqala zobuntwana
Ukuzivocavoca okunamandla komncane kunabo bonke
Izimpikiswano ezingenakunqandeka zomshoshaphansi we-sten-spinal ne-tonic
Isimo esiyingozi kakhulu: ukugwinya kwengane
Ukuhlanzeka kwezitho zocansi zentombazane
Isithombe somtholampilo se-opiate poisoning
Indlela yokususa ngokushesha imivimbo kanye nokuhlukunyezwa
Isitsha sokuya esikhathini - igama elisha ekuhlanzekeni kwabesifazane
Indlela yokunakekela kahle i-aquarium ekhaya
"Izinhliziyo" ezenziwe nge-chocolate emhlophe ngama-alimondi kanye nezithelo zomtholo
Ungaba kanjani umama nomkami omuhle?
Isitha esiyimfihlo: imikhiqizo ewusizo ejwayelekile ye-TOP-3
Ukubonisana kwe-inthanethi kwesazi sengqondo somndeni
Isaladi yama-apula no-utamatisi